Samsung Galaxy S10 igwefoto: otu a ka o si aru oru n‘abalị | Gam akporosis
Nke a bụ otu igwefoto Samsung Galaxy S10 si emeziwanye mgbe emelitere ọhụụ
Obere onwa gara aga anyi gwara gi ihe ohuru ọnọdụ abalị nke onye nrụpụta Korea na-arụ ọrụ iji nye gị flagship a ka nnọọ mma foto ngalaba na ala-ìhè gburugburu. Mgbe ogologo oge chere, anyị nwere ike mechaa melite mmelite a iji melite igwefoto Samsung Galaxy S10.
Ma ugbu a, e bipụtara ihe oyiyi mbụ na-egosi otu igwefoto Samsung Galaxy S10 si arụ ọrụ mgbe ọ jikọtara ọnọdụ abalị ọhụụ. Kpachara anya, mmelite nke arụmọrụ karịrị ihe dị ịrịba ama. Anyị na-agwa gị nkọwa niile.
Ee, igwefoto Samsung Galaxy S10 na-eme foto kacha mma n'abalị mgbe emelitere ọhụụ
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi na-achị ndị a chọpụtara, na n'aka ekpe anyị nwere na mbụ mode nke Samsung Galaxy S10 igwefoto, mgbe anyị nọ n’akụkụ aka nri anyị nwere nsonaazụ ọ na - enweta mgbe mmelite ikpeazụ ya. Esemokwu ndị ahụ dịkwa oke ịtụnanya.
Iji malite, anyị na-ahụ a ukwuu ala mkpọtụ larịị, na mgbakwunye na ịhụ ọtụtụ ihe akọwapụtara, yana ogo nke ọkụ na-eme ka nnabata na gburugburu ọkụ adịghị mma nke ọma. Kpọmkwem, n'aka ekpe anaghị amata ọnụ ọgụgụ Darth Vader, ebe n'akụkụ aka nri ọ bụ amata n'ụzọ zuru oke.
N'ihe atụ nke abụọ a, ọdịiche dị ọbụna karịa palpable. Anyị na-ekwu maka foto esere ọkụ ọkụ ikpeazụ wee see, ma anyị nwere ike ịhụ na akụkụ aka ekpe, nke kwekọrọ na ọnọdụ nkịtị, na-enye ọkwa dị oke elu. Mana anyị na-ahụ nnukwu ọdịiche dị na ọkụ ahụ, ebe ọ bụ na foto dị n'aka nri na-egosi etu igwefoto igwefoto nke Samsung Galaxy S10 nwere ike ịnwe ọkụ zuru oke na foto abalị iji meziwanye nsonaazụ ahụ. Na niile site na nhazi ngwanrọ!
N'ikpeazụ, anyị ga-egosi gị ihe atụ nke atọ nke eserese n'èzí na ọnọdụ abalị. Ihe ndịiche dị ebe a na-eme ka o doo anya na, ọ bụrụ na ị nwere Galaxy S10, ịkwesịrị imelite ozugbo enwere ike ịnụ ụtọ uru nke ọnọdụ abalị ọhụụ. Maka ndị na-ebido, mbara igwe dị ntakịrị karịa n'akụkụ aka nri, ọ bụghị ịkọcha ọkụ zuru oke na foto enwetara mgbe emesịrị ihe oyiyi ahụ. Samsung Galaxy S10 igwefoto. Ọ bara uru mgbanwe ahụ, nri?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Nke a bụ otu igwefoto Samsung Galaxy S10 si emeziwanye mgbe emelitere ọhụụ
OnePlus 7 Pro kwere nkwa imeziwanye ihe kachasị ike ya. Kedu ihe ọ ga-abụ?